YEMEN: Xuutiyiinta Oo Dilay Cali Cabdalle Saalax | Dhamays Media Group
YEMEN: Xuutiyiinta Oo Dilay Cali Cabdalle Saalax
Yemen (Dhamays) – Wararka ka imaanaya dalka Yemen ayaa sheegaya in Madaxweynihii hore ee dalkaasi Cali Cabdalla Saalax lagu dilay dagaal uu Xuutiyiinta kula galay magaalada Sanca.
Telefiishan ay Xuutiyiinta maamulaan oo lagu magacaabo al-Masirah ayaa baahiyay muuqaalka nin Wasiirka Arrimaha gudaha lagu sheegay oo shaacinaya in “la soo afjaray dhibaatada Maleeshiyada khiyaanada qaran sameysay, lana dilay Hoggaamiyahooda”.
Sawirro iyo muuqaallo lagu baahiyay baraha bulshada waxay muujinayaan Meydka Qof u eg Cali Cabdalle Saalax oo dhaawacyo xun ay ka gaadheen madaxa.
Xisbiga siyaasadeed ee uu ka tirsan yahay ayaa beeniyay in la dillay xilli hore, ka dib markii kooxda Xuutiyiinta ay qarxiyeen gurigiisa ku yaalla caasimadda Yemen ee Sanca.
Wixii ka horeeyay Toddobaadkii tagay, taageerayaasha Cali Cabdalla Saalax waxay la safnaayeen ururka shiicada ah ee Xuutiyiinta, waxayna dagaal kula jireen dowladda Yemebn ee Sucuudiga uu taageero.
Balse, khilaaf siyaasadeed iyo muran dhanka maamulka ee Masaajidka wayn ee ku yaalla meesha mucaaradka ay maamulaan ee Sanca ayaa sababay dagaal culus oo oo dhex maray taageerayaasha Cali Cabdalla Saalax iyo maleeshiyada Xuutiyiinta.
Sabtidii, Saalax wuxuu ku baaqay “in bog cusub la furo” oo uu taageerayo Mr Haadi, haddii isbeheysiga Sacuudiga uu hoggaaminayo ay joojiyaan weerarka Yemen iyo xannibaadda xun ee ay ku hayaan.
Isbeheysiga iyo dowladda Cabdurabah Mansuur Haadi ayaa soo dhoweeyay hadalkaasi. Balse, Xuutiyiinta waxay Saalax ku eedeeyeen in uu “afgembiyeyo isbeheysi “aanu weligii aaminin”.
Xalay, magaalada Sanca waxaa ruxay duqeynta ay geysanayaan dowladaha uu hor kacayo Sacuudiga, waxaana lala eegtay Xuutiyiinta. Sidoo kale dagaal dhulka ah ayaa la isu adeegsaday hub culus. Hay’adaha gargaarka waxay sheegeen in shacab badan ay ku go’doomeen meesha uu dagaalka culus ka socday
Maanta, salaaddii duhur ka dib, guriga Cali Cabdalla Saalax ayaa la qarxiyay. Weli ma cadda in Saalax uu ku jiray guriga, balse saacado ka dib qaraxa, waxaa soo baxay wararka sheegaya in uu dhintay.
Xakim Almasmari, oo ah tifaftiraha Wargeyska Yemen Post ayaa TV-ga Al Jazeera u sheegay in dableyda Xuutiyiinta ay rasaas ku fureen kolonyada Saalax oo maraysay bar-koontorool oo ku taalla Koonfurta Sanca. Wuxuu ku sii socday deegaanka uu ka soo jeedo ee Sanhan.
Cali Cabdalla Saalax wuxuu Madaxweyne ka noqday Waqooyiga Yemen, 1978-kii, Markii Yemen ay midowday 1990-kii, wuxuu Madaxweyne u noqday Jamhuuriyaddii cusbeyd ee Yemen.
Dilka Cali Cabdalle Saalax, ayaa la aaminsan yahay inay dab ku sii shidi doonto Dagaalka ka socday Dalka Yemen Dhowrkii Sannadood ee u dambeeyay, kaasi oo sababay dhimashada kumanaan Qof iyo Barakaca Dhowr Milyan oo Qof.
Previous: Cabdicasiis Samaale Oo Hambalyeeyay Madaxweynaha Cusub Ee La Doortay
Next: Hargeysa: Dab Ka Kacay Guriga Wasiirka Madaxtooyada Maanta